Taageerayaasha Real Madrid oo si weyn ugu garab istaagay Ramos khilaafka kala dhexeeya Florentino Pérez – Gool FM
Taageerayaasha Real Madrid oo si weyn ugu garab istaagay Ramos khilaafka kala dhexeeya Florentino Pérez
Dajiye March 8, 2019
(Madrid) 8 March 2019. Sergio Ramos ayaa ku guuleystay inuu garab istaag weyn ka helo taageerayaasha kooxda Real Madrid, kadib khilaaf soo kala dhex galay isaga iyo madaxweynaha kooxda Florentino Pérez, kadib markii ay Los Blancos isaga hartay tartanka Champions League.
Real Madrid ayaa guuldaro niyad jab ee 4-1 ah kala kulantay kooxda reer Holand ee Ajax kulankii lugta labaad wareega 16-ka tartanka Champions League ee ka dhacay garoonka Santiago Bernabeu.
Wararka ayaa waxay intaas ku sii darayaan in madaxweynaha kooxda Real Madrid Florentino Pérez uu ku booqday ciyaartoyda qolka labiska isagoo careysan, isla markaana ku eedeeyay ciyaartoyda inaysan iska saarin wax mas’uuliyad ah ciyaarta.
Laakiin Ramos ayaa u jawaab celiyay Florentino Pérez wuxuuna ku eedeeyay inuu isaga mas’uul ka yahay xaalada ka taagan kooxda Real Madrid, sababa la xiriira qorshaha iyo go’aamada khaldan ee jahwareerka ku saleysan uu qaatay suuqii xagaaga ee lasoo dhaafay.
Hadaba wargeyska “AS” ee dalka Spain ayaa wuxuu qaaday afti ama cod uruurin ku aadan jamaahiirta si loo kala ogaado labada dhinac cida saxan.
Balse natiijada ka soo baxday cod uruurintan ayaa qeyb weyn taageerayaal ah ee cel celis ahaan gaarsiisan 69%, waxay u codeeyeen in Ramos uu ku saxan yahay hadalka uu ku yiri Florentino Pérez, halka 31% ay garta siiyeen madaxweynaha kooxda.
Wargeyska ayaa warbixintiisan shaaca kaga qaaday in hadalka Ramos uu kula jeedo in go’aamada Pérez ee ku aadan suuqa kala iibsiga sanadihii lasoo dhaafay ay kooxda soo gaarsiisan heerkan ay maanta taagan tahay.
Waxaa xusid mudan in kooxda Real Madrid ayaa iska lumisay dhowr ciyaartoy muhiim ah uu ugu horeeyo Cristiano Ronaldo, si la mid ah James Rodríguez, Mateo Kovačić, Pepe iyo Álvaro Morata.
"War adigaan kaaga tagayaa kooxda.".- Ramos oo sidaa ku hanjabay kaddib Muran ka dhacay qolka dhar-badalashada Real Madrid...(Yay is qabteen?)
“Way fiicnaan lahayd in markale Jose Mourinho uu ku laabto Real Madrid”